Shuruudan Soo Buuxiya Oo Dembele Qaata!! - Barcelona Oo HAL Shuruud Oo Kaliya Ku Xidhay Liverpool Si Ay Uga Iibiso Ousmane Dembele. - Gool24.Net
Shuruudan Soo Buuxiya Oo Dembele Qaata!! – Barcelona Oo HAL Shuruud Oo Kaliya Ku Xidhay Liverpool Si Ay Uga Iibiso Ousmane Dembele.
January 11, 2020 Apdihakem Omer Adem
Wargeyska ree Spain ee El Desmarque ayaa kooxda Liverpool war cusub ka siiyay go’aanka ay kooxda Barcelona ka gaadhay iibka xiddiga bar-tilmaameedka u ah ee Ousmane Dembele.
Dembele ayaa wajahaya hubaanti la’aan ka taagan mustaqbalkiisa kooxdaas ah xilli ay Barcelona doonayso inay dib ula soo saxeexato Neymar JR oo laba sano kahor kaga biiray Paris Saint-Germain.
El Desmarque ayaa intaas ku daraya in tababare Jurgen Klopp uu doonayo saxeexa Dembele oo uu u arko mid siinaya kala duwanaansho dhinaca weerarka ah oo uu u adeegsan karo inuu la isticmaalo saddexleyda Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino.
Haddaba, Sida uu sheegayo wargeyskaasi, Shuruuda kaliya ee ay Blaugrana ku xidhay Liverpool ee iibka Dembele ayaa ah in kasoo gudbiso dalab 100 Milyan oo euro iyo wax ka badan ah kaddibna ay u ogolaan doonaan bixitaan.
Haddiiba ay Liverpool dalabka Barcelona fuliso oo ay 100-kaas Milyan bixiso ayay kooxda ree Spain markasta noqonaysaa mid khasaare galaysa sababtoo ah in lacagtii ay kula soo wareegeen laba sano kahor ay ahayd mid intaas ka badan.
Barca ayaa Dembele kasoo bixisay 105 Milyan oo rasmi ah iyo 40 Milyan oo gunnooyin ah, Dembele ayaa wakhtigaas ayaa mid kamida xiddigaha ugu mustaqbalka fiican Yurub laakiin tan iyo wakhtigaas ayuu hoos u dhacay xilli ay dhaawacyo dishoodeen.
Ugu dambayn, Xogta xiddigan ee kooxda Camp Nou ayaa ah inuu 74 kulan usoo ciyaaray isaga oo 19 gool soo dhaliyay 17 kalena caawiye kasoo ahaa.